Admin Assistant (Male) (Around 200,000 MMK) Code-12365
– Posted by DagonGlory
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
-Computer စာစီ/ စာရိုက်ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
-Admin လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
အလုပ်လျှောက်လွှာအား အီးမေးလ်ဖြင့် [email protected] (သို့) အမှတ် ၂၃၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊မြေနီကုန်း သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job Tags: admin assistant (male). Salary: 100,000 - 300,000. 77 total views,2today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ